बेलायतले २ वर्षे वर्किङ भिसा दिँदा नेपाली विद्यार्थीलाई के फाइदा ? | Makalukhabar.com
बेलायतले २ वर्षे वर्किङ भिसा दिँदा नेपाली विद्यार्थीलाई के फाइदा ?
भाद्र २५, काठमाडौं । विदेशी विद्यार्थीले बेलायती विश्वविद्यालयबाट ‘ग्रयाजुएट’ भएपछि दुई वर्षसम्म ‘वर्किङ भिसा’ पाउने भएका छन् । बेलायती सरकारले इन्टेक २०२०–२१ देखि यस्तो नियम ल्याउन लागेको हो । उक्त कुरा बेलायत होम अफिसको अध्यागमन सम्बन्धि पछिल्लो श्वेत पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
तत्कालिन गृहमन्त्री टेरेजा मेको पालामा सन् २०१२ मा हटाइएको पोस्ट स्टडी वर्क भिसा व्यवस्था पुनः ल्याउन लागिए सँगै अन्तराष्ट्रिय विद्यार्थीहरु बेलायत तर्फ आकर्षित भएका छन् । बेलायतमा विदेशी विद्यार्थीलाई हाल ब्याचलर्स, मास्टर्स वा पिएचडी गरेपछि चार महिनामात्र काम गर्न छुट छ । नयाँ प्रावधानले नेपाली विद्यार्थीलाई समेत बेलायत गएर अध्ययन गर्न र काम गर्न थप सुविधा हुने शैक्षिक परामर्श ब्यवसायीले बताएका छन् ।
करिब १० वर्ष अघिको प्रावधान पुनः ल्याउन लागिएको छ । यसले बेलायत गएर उच्च शिक्षासँगै करियर बनाउने चाहना भएका नेपाली विद्यार्थीलाई ठूलो सहयोग पुग्छ ।’ राइटपाथ करियर काउन्सेलिङका सिइओ फिलिप डिसीले बताए । ‘बेलायत इयूबाट अलग्गिएपछि विदेशी विद्यार्थीको संख्या कम हुँदै जानु र बेलायतको आर्थिक अवस्थामा परिवर्तन गर्नपनि पुनः वर्किङ भिजा सुरु गरिएको हो ।’ उनले भने ।
डिसीका अनुसार ब्याचलर्स, मास्टर्स र पिएचडी गर्न बेलायत जाने विद्यार्थीले यो भिसाबाट प्रत्यक्ष फाइदा लिन सक्छन् । ‘खर्च हिसाबले बेलायतमा अध्ययनपछि काम गर्दै आफ्नो लगानी उठाउने र सेटल हुने यो राम्रो अवसर हो ।’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले घोषणा गरेको नयाँ रणनीतिको मुल उद्देश्य विश्वभरका विद्यार्थीलाई बेलायती विश्वविद्यालयतर्फ आकर्षित हो । यूरोपियन कानुन अनुसार बेलायती र ईयू विद्यार्थीलाई वर्षको ९ हजार २५० पाउन्ड ट्युसन फी तोकिएको छ तर अन्तराष्ट्रिय विद्यार्थीलाई ’लिमिट’ छैन । अन्तराष्ट्रिय विद्यार्थीलाई बेलायती विश्वविद्यालयले आफ्नै ढंगले शुल्क लिन सक्ने प्रावधान छ ।
अन्तराष्ट्रिय विद्यार्थीले बेलायतमा अध्ययन गर्दा वार्षिकरुपमा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष करिब २० बिलियन पाउन्ड योगदान गरिरहेका बताइन्छ । हाल बेलायती विश्वविद्यालयमा ४ लाख ६० हजार अन्तराष्ट्रिय विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको तथ्यांक छ ।
विव्यस अध्यक्ष बोहराविरुद्ध सात लाख बढीकोे भ्रष्टाचार मुद्दा
फागुन ५, काठमाडौं । विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षविरुद्द सात लाख बढीको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले केदारेश्वर उच्च माध्यमिक विद्यालय, लाना, डोटीका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष कृष्ण बहादुर बोहराविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा सात लाख बढीको भ्रष्टार... जारी राख्नुहोस...
सपना स्कुलमा बालकेन्द्रित शिक्षा सम्बन्धी प्रशिक्षण
फागुन ४, चितवन । चितवनको सौराहामा रहेको सपना स्कुलले शिक्षक तथा अभिभावकहरुलाई बालकेन्द्रित शिक्षण सिकाइका बारेमा प्रशिक्षण दिएको छ । शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन सपना स्कुलले सो कार्यक्रम आयोजना गरेको विद्यालयकी अध्यक्ष बर्षा पुरीले बताइन । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि रत्ननगरका शिक्षा शाखा प्रमुख ब... जारी राख्नुहोस...
शिक्षक समायोजनको बेला आएको छ, सरुवा–बढुवामा कसैलाई भेटेर हैरान नपारौं : मन्त्री बाँस्कोटा
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले शिक्षकलाई सरुवा–बढुवामा ‘घरपायक’ बनाउन नेता तथा जनप्रतिनिधि नगुहार्न आग्रह गरेका छन् । उनले आइतबार बनेपा नगरपालिका–३ सुमारास्थित प्रभात आधारभूत विद्यालयको ३८ औँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै शिक्षक सुरुवा–बढुवामा नेता तथा जन... जारी राख्नुहोस...
बर्दगोरिया गाउँपालिकाको खेलकुद कार्यक्रमप्रति संस्थागत विद्यालयको आपत्ति
फागुन ३, कैलाली । कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिकाद्वारा आयोजना गरिएको खेलकुद कार्यक्रमप्रति संस्थागत विद्यालयलले असन्तुष्टि जनाएको छ ।मनोमानी ढंगले विद्यालयप्रति विभेदपूर्ण व्यवहार गरिएको भन्दै गाउँपालिकाको वडा नम्बर–१ स्थित नोवेल माविले आपत्ति जनाएको हो ।विद्यालयलाई कार्यक्रमबाट बन्चित हुने किसिमले... जारी राख्नुहोस...
शिव– शक्ति विद्यापीठकोे ९ औँ वार्षिकोत्सव मनाईँदै, आज देखि भागवत सप्ताह शुरु
फाल्गुण ३, लम्की । कैलालीको लम्कीचुहा–१ रहेको शिव– शक्ति श्रीविद्यापीठकोे ९ औं वार्षिक उत्सव मनाउन शुरु भएको छ । वार्षिक उत्सवको अवसरमा चन्द्रमौलीश्वर धाम परिसरमा श्रीमद्भागवत सप्ताहज्ञान महायज्ञ आज देखि शुरु भएको हो ।स्वामी श्री निःशेषनन्द जी महाराजको सत्संकल्प बाट शुरु भएको महायज्ञमा प्रखर भागवतवक... जारी राख्नुहोस...
चीनमा रहेका नेपाली ल्याउन सरकारलाई ध्यानाकर्षण
फागुन २, काठमाडौँ । नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) ले नेपाली विद्यार्थीहरुलाई यथाशीघ्र नेपाल ल्याउन र उनीहरुलाई सुरक्षा प्रदान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । छिमेकी मुलुक चीनमा फैलिएको नोबेल कोरोना भाइरसले विश्व त्रसित भएको बेला चीनमा फेसेका नेपालीको उद्धार गर्न संघले सरकारको ध्यानाकर्षण गर... जारी राख्नुहोस...
काठमाडौंमा अन्तरराष्ट्रिय स्तरको शैक्षिक मेला हुँदै
फागुन १, काठमाडौं । काठमाडौंमा अन्तरराष्ट्रिय स्तरको शैक्षिक मेलाको आयोजना हुने भएको छ । एस आई यूकेको आयोजनामा काठमाडौंमा पहिलोपटक अन्तरराष्ट्रिय स्तरको शैक्षिक मेला हुन लागेको हो । मेला यहीँ फेब्रुअरी २२ तारिख अर्थात फागुन १० गते काठमाडौंको होटल अन्नपूर्णमा आयोजना हुनेछ । विश्वका २३ देशहरुमा शाखा स... जारी राख्नुहोस...
पाँच दिनदेखि काभ्रे बहुमुखी क्याम्पसमा अनेरास्ववियुको तालाबन्दी
फागुन १, काभ्रेपलाञ्चोक । अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु)ले गरेको तालान्दीका कारण पाँच दिनदेखि बनेपा नगरपालिकास्थित काभ्रे बहुमुखी क्याप्पसको प्रशासन र लेखा शाखा बन्द अवस्थामा रहेको छ । क्याम्पसले कक्षा ११ र १२ मा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई अनिवार्य विषय अध्यापन नगराई परीक्षामा साम... जारी राख्नुहोस...
प्रधानाध्यापकको कुटाइबाट कक्षा ८ मा अध्ययनरत छात्रा घाइते
माघ २९, तनहुँ । प्रधानाध्यापकको कुटाइबाट तनहुँको व्यास नगरपालिका–९ गजौँडेस्थित माहिन्द्री माविमा कक्षा ८ मा अध्ययनरत छात्रा घाइते भएकी छन् । मंगलबार विद्यालय समयमा प्रधानाध्यापक प्रकाश काफ्लेको कुटाइबाट छात्रा निर्जला ढकाल घाइते भएकी हुन्। काफ्लेले छात्राको कानमा पर्ने गरी कुट्दा कानमा असर परेको उनक... जारी राख्नुहोस...
दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षा आवश्यक : पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डे
माघ २९ गते । राप्ती नगरपालिका ६ मा रहेको भण्डारा माध्यमिक विद्यालयले ५० औं वार्षिकोत्सव तथा अभिभावक दिवस बुधवार मनाएको छ । पूर्व अर्थमन्त्री एवंम् प्रतिनिधी सभा सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेको प्रमुख आतिथ्यतामा वार्षिकोत्सव मनाईएको हो ।सो अवसरमा पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले सामुदायिक विद्यालयहरुले प्राविधिक श... जारी राख्नुहोस...